Qaramada Midoobay oo sheegtay in ka badan 7,250 qof si khasab ah looga barakiciyay Laascaanood - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaQaramada Midoobay oo sheegtay in ka badan 7,250 qof si khasab ah looga barakiciyay Laascaanood
October 16, 2021 Puntland Mirror Somalia 0
Qof naafo ah oo kamid ah dadka khasabka Laascaanood looga soo saaray. [Isha Sawirka: Dowladda Hoose ee Gaalkacyo]
Garoowe-(Puntland Mirror) In ka badan 7,250 qof ayaa si khasab ah uga barakacay magaalada Laascaanood iyo deegaamada ku hareeraysan, sida uu sheegay Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Isku-xirka Arrimaha Gargaarka (UNOCHA).
In ka badan 3,300 oo ka barakacay Laascaanood ayaa gaaray Gaalkacyo ilaa 2-dii October markii uu bilaabmay barakicinta xooga ah, 986 iyaga kamid ah waxay u gudbeen maamulka Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Banaadir, UNOCHA ayaa intaas ku dartay.
Barakicinta xooga ah ayaa dhibbaato ku keentay qoysaska sida in qoysas ay is-waayeen iyo hanti lumid, sida ay sheegtay UNOCHA.
Dadkaan oo u badnaa rayid ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ayaa maamulka Somaliland si Khasab ah ay uga saareen magaalada Laascaanood, waxaana soo dhaweyn iyo gacan u fidiyay Puntland gaar ahaan maamulka magaalada Gaalkacyo.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ku celiyay in la joojiyo dagaalka Tukaraq. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo maanta oo Jimce ah ka hadlayay masjid kuyaala Muqdisho ayaa yiri: “Waxaan rabaa inaan [...]